..र परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु (बीबीसी बाट हर च्वाइस्)
Topic: ..र परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु (बीबीसी बाट हर च्वाइस्)
Author Topic: ..र परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु (बीबीसी बाट हर च्वाइस्) (Read 2482 times)
« on: February 04, 2018, 06:08:56 AM »
पहिलो पटक जब फेसबुकमा उसको म्यासेज आयो म झस्किएँ । मुटुको गति थामिए जस्तै भयो । श्रीमान घरमा हुनुन्थेनन् । फेरी पनि मैले कुनै गलत गर्दैछु झैं लाग्यो । अनलाईनमा आएको एउटा म्यासेजलाई हेर्न पनि मैले यता–उता हेरेँ, कसैले देखेको पो छ कि ?
आफैमाथि हाँसे अनि सोचे घरमा कोही पनि छैन् त कोसँग डराएको होला । उसले म्यासेजमा– ‘हाय म तीमीसँग मित्रता गाँस्न चाहन्छु’ भनेर लेखेको थियो । म्यासेज पढेर मुहारमा मन्द मुस्कान आयो । तर, आफैलाई होईन जस्तो गरी सम्माहले ।
‘एउटा नचिनेको मान्छेको अनलाईनमा म्यासेज आउँदा मैले चाँसो किन राख्नेँ ?’ श्रीमानको कुरा मनमा आउने बित्तिकै मनमा कस्तो घोँचे जस्तै भयो । त्यो उनको चिसोपना हो कि कुनै नचिनेको मान्छेले लेखेको ‘हाय’ले पनि मेरो मनमा काउकुती लगाई रहेको थियो ।
शायद मैले उसलाई कुनै प्रतिउत्तर नदिन पनि सक्थेँ तर उनी प्रति ममा यति धेरै रिस उठी रहेको थियो कि मैले पनि ‘हाय !’ भनेर लेखि पठाएँ । थाहा छैन कसरी हो उसलाई म एयर होस्टेज हुँ भन्ने लागि रहेको रहेछ । मैले उसलाई साँचो कुरा भन्न सक्थेँ तर त्यति बेला जिस्कीदा मलाई पनि मजा आई रहेको थियो ।
सानैदेखि सबैले ‘तिमी कति राम्री’ भनेको सुनेर हुर्केकी थिएँ । दुध झैँ रंग, ठुला–ठुला आँखा, सुन्दर मोहडा र मिलेको सुन्दर ज्यान जोबन । तर मेरो परिवारलाई मेरो बिहे गरिदिने कुरा ठुलो थियो । जुन केटा पहिलो चोटी हेर्न आयो त्यसैसँग लगाएर पठाई दिए ।
तर त्यो मान्छेलाई न रोमान्ससँग मतलब छ न मेरो भावनासँग । मलाई के लाग्थ्यो भने बिबाहपछि मेरा श्रीमानले मलाई आँखा भरि हेर्नेछन्, रिसाएँ भने फकाउने छन्, ‘सप्राईज’ दिनेछन् र कम्तीमा केही हुन सकेन भने एक कप चिया त पकाउने छन् ।
तर म के देख्छु, त्यो मान्छेको जीन्दगी त पुरै मेशिन जस्तो रहेछ– बिहान उठ्यो, आफ्नो अफिस गयो, राती दश बजे आयो खाना खायो र सुत्यो । त्यस्तो होईन कि मलाई यी कुराहरु थाहा छैनन् । तर आफ्नी श्रीमतीलाई माया गर्न, उसलाई आँखाभरी हेर्न र अंगालो हालेर मायाका दुईटा शब्द बोल्न कति पो समय लाग्छ र ?
कि त मेरो श्रीमानमा यस्ता भावनाहरु नै छैनन् अथवा यस्ता कुरा भन्दा उनलाई आफ्नो पुरुषार्थमा धक्का लागेको महशुस हुन्छ । सेक्स गर्छन् तर रोमान्स पटक्कै गर्दैनन् । बिहे भएको एक बर्ष भयो तर अझैसम्म पनि हामीले ‘फोरप्ले’ गरेका छैनौँ ।
मैले जतिसुकै मिठो खाना पकाउँ अथवा घरलाई जति सुकै चिटिक्क पारेर राखुँ एक शब्द पनि बोल्दैनन् । सोध्यो भने ‘ठिक छ’ भन्दिनछन् । यी र यस्तै कुराहरुमा हराएकी थिएँ कि आकाशले मलाई फेरी झस्कायो । उ मेरो फोटो देख्न चाहन्थ्यो ।
इन्टरनेटको दुनिया मेरा लागि नयाँ थियो । फेसबुक पनि उनले नै खोली दिएका थिए । ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट’ गर्न पनि उहाँले नै सिकाएको हो । तर फोटो पोस्ट गर्न डर लाग्थ्यो ।
तर आकाश मलाई हेर्न बेचैन थियो । केही दिनसम्म मैले उसलाई अल्झाई रहेँ । त्यसपछि मैले उसलाई म एयरहोस्टेज होईन भनिदिएँ । फोटो पठाई पनि दिन्थे तर मसँग कुनै ढंगको फोटो पनि थिएन ।
आकाश पनि बिबाहित थियो । तीन बर्षको छोरो थियो उसको । मल्टीनेशनल कम्पनीमा पनि काम गर्ने रहेछ । विदेश जाने आउने गरि राख्ने । निकै पार्टीहरु हुन्थे जाहाँ केटीहरुले चुरोट खानु निकै आम कुरा थियो । तर मेरा लागि नयाँ ढंगको रोमान्च थियो ।
उसकी श्रीमती पनि एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्दिरहिछन् । उसले नै उनीहरुले एक अर्कालाई धेरै समय दिन नसकेको कुरा भन्थ्यो । एक दिन उसले भन्यो– ‘आज म निकै दुःखी छु । मेरी श्रीमती मसँग यसकारण कुरा गर्न मानिरहेकी छैन् किनभने उ एउटा मिटिङमा छे ।’
म उसको भावना बुझ्न सक्थेँ । हरेक दिन जसो कुरा गर्दा निकै आनन्द हुन्थ्यो । यो सबै कुरा मसँग पहिलो पटक हुँदै थियो । एक चरण त कस्तो लाग्ने भने सक्दो छिटो काम सकेर कुरा गरौँ झैँ लाग्ने । एक दिन उसले वेवक्याममा आउन भन्यो । म डराएर अफलाईन भएँ । कस्तो लाग्यो भने आजैको दिन मैले नुहाएकी छैन यस्तै देख्यो भने के सोच्ला ।
तर अब उ मलाई जसरी भए पनि हेर्न जिद्दि गर्न थाल्यो । के गरौँ के गरौँ भएर म उदेखि टाढिन थालेँ । उ अनलाईन हुने समय म अफलाईन हुन थालेँ । केही दिन यस्तै चलि रह्यो अनि एक दिन रिसाएर उसले मलाई ब्लक गरि दियो ।
हाम्रो कुनै सम्बन्ध थिएन तर पनि उ नहुँनाले मेरो जीवनमा झनै रित्तोपन थपियो । आफैमाथि रिस उठ्न थाल्यो कि म जागिर किन गर्दिनँ । पैसा कमाउन सक्ने थिएँ भने आफ्नै ढंगले निर्णयहरु गर्न सक्ने थिएँ ।
त्यसको केही समयसम्म म कसैसँग बोलिनँ तर, जति बेला पनि आकाशकै कुरा मनभरी खेल्थ्यो । उसँग हुँदा दिन कति छिट्टै बित्थ्यो । केही नभई त्यसै एक्लै हाँस्ने गर्थेँ ।
त्यसरी हेर्ने हो भने यसको सबै भन्दा ठुलो फाईदा मेरो श्रीमानलाई नै भयो । उनले केही पनि नगरिकन मेरो जीवनको त्यो खाली ठाउँ भरिएको थियो जुन कुरा उनले कहिलै देख्न सकेनन् । फेरी अर्को कोणबाट सोच्ने हो भने मैले केही गल्ती पनि गरेकी होईन ।
न मैले कसैलाई धोका दिए न म कसैसँग सुतेँ । मात्र कुराकानी गरेँ त्यो पनि केका लागि भन्दा म कसैकी श्रीमती मात्र होइन म मान्छे पनि त हुँ जसका आफ्ना केही इच्छा आकांक्षाहरु हुन्छन् । अब के गर्ने र के नगर्ने भन्ने दुविधामै केही दिन थप बिते ।
त्यसपछि एक दिन यसै गरी एउटा केटाको प्रोफाईल हेरेँ । अनुहार पनि राम्रै थियो । थाहा छैन मलाई के लाग्यो मैले उसलाई ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ पठाएँ । उसले भन्यो– ‘तपाईं त बिबाहित हो अनि मलाई रिक्वेस्ट किन पठाएको ?’ मैले भने– ‘के बिबाहित महिलाहरुले साथी बनाउन हुँदैन ?’
त्यसपछि के थियो कुरा अगाडि बढ्यो । म आज पनि उसको सम्पर्कमा छु । यसैगरी एक दिन फेसबुकमा एउटा प्रोफाईल देखेँ जसको वालमा केही सिनेमाका कलाकारहरुको फोटो थियो । मलाई लाग्यो यो मान्छे निकै हाँसो ठट्टा गर्ने मान्छे होला यसको वालमा नयाँ नयाँ कुरा देख्न पाईनेछ ।
मैले उसलाई ‘फ्रेन्डरिक्वेस्ट’ पठाएँ । उसले एक्सेप्ट पनि ग¥यो । यसैगरी जीवन घस्री राख्याथ्यो कि छोरी भैहाली । त्यसपछि सबै कुरा टक्क अडियो । पहिलो दुई बर्षसम्म त कुनै होस नै रहेन कि म कहाँ छु । अब छोरी तीन बर्षकी भैसकी तर अहिले पनि आफ्ना लागि समय निकाल्न सजिलो छैन ।
घरी–घरी कसैसँग कुरा गरौँ भन्ने लाग्छ तर जसै फोन उठायो छोरी विडियो हेर्न भनेर आई पुग्छे । कहिले काँही त निकै ‘फ्रस्टेसन’ हुन्छ । मलाई यो के भैरहेको हो ? यसरी जीवन जीउनुको अर्थ ? भन्ने लागि रहन्छ । मात्र एउटी आमा र कसैकी स्वास्नी बनेर मेरो जीवन सकिएको छ ।
त्यसैले मैले के निर्णय गरेकी छु भने मैले यी सबै आफ्नी छोरीको जीवनमा हुन दिन्न । उसलाई केही बनाउनेछु । उसले आफ्नो जीवन आफ्नै मुल्य र सर्तहरुमा बाँचोस ।
बीबीसीले भारतीय महिलाको वास्तविक जीवन कथा समेटने गरी #HerChoice श्रृखला चलाएको छ ।
Re: ..र परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छु (बीबीसी बाट हर च्वाइस्)
« Reply #1 on: February 04, 2018, 06:10:13 AM »
जब मेरा पति एक महिलासँग सम्बन्धमा बसे...
त्यसरात जब मेरा पति घरबाट निस्के, मलाई मेरो दुनियाँ सकिएको महशुस भयो ।
यो तबाहीको आवाज कही पनि सुनिएन, बरु यसको ठाँउ भयानक मौनताले लियो ।
म आफ्नी १० बर्षकी छोरीसँग उभिएका ती तस्वीर सम्झिरहेकी थिएँ, जुन हामीले पछिल्ला १० वर्ष सँगै रहेर सजाएका थियौँ ।
मैले कैयौपटक उनीसँग कुरा गर्ने कोशिष गरे । तर, हरेक पटक उनले जवाफ दिए अब हाम्रो विवाह सकियो ।
पछि मलाई उनका साथीबाट थाहा भयो कि उनी आफूसँगै काम गर्ने एक महिलासँग सम्बन्धमा छन् ।
ती अवस्थाको बयान गर्नका लागि ‘स्तब्ध रहनु’ कुनै सही शब्द थिएन ।
म अब अरु जिउन चाहँदिन थिए । आफूलाई सिध्याउन भनेरै मैले धेरै औषधी खाएँ ।
सायद म मर्थेँ, तर खै कसरी बाँचेँ ?
मैले उनका अगाडि कहिल्यै आफ्नो जीवनको कल्पना गरेकी थिइनँ ।
मैले विवाहपछि आफ्नो भविष्यको वारेमा केही सोचेकी पनि थिइनँ ।
मैले मेरो मायालाई अरु दोस्रो कुनै महिलासँग देख्न सक्दिन थिएँ । म यो सच्चाईको स्वीकार गर्न चाहँदिन थिए ।
म आफ्नो जीवन साथीलाई अर्को महिलासँग बाँड्नका लागि तयार थिइँन ।
म पीडा र दुःखले घेरिएकी थिएँ । म ती महिलालाई गाली गरिरहेकी थिएँ, जबकी यो भुलेकी थिए कि यसमा मेरा पतिको पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
म यो सम्झिरहेकी थिएँ कि, यो सबै एक पलमा भएको होइन । बितेका केही याद मेरो दिमागमा चल्न लागे । र, म ती घटना एक–एक गरेर जोडन थालेँ ।
मैले आफैनैतिर हेर्न लागेँ, न म सुन्दरी छु, न धेरै पैसा कमाउँछु ।
‘तिमीलाई पाउनु मेरो सौभाग्य हो’, यो कुरा मेरा लागि बदलियो र भयो, ‘तिमी मेरो जिन्दगीमा आउनु दूर्भाग्य थियो ।’
‘तिमी बहुतै राम्रो छौँ ’ यो बदलिएर भयो, ‘तिमी मसँग रहन लायक छैनौँ ।’
मैले उनका गर्लफ्रेन्डका अगाडि आफूलाई गाउँकी काम नलाग्ने केटी महशुस गर्न लागेँ ।
सबैभन्दा बढी माया
उनी मलाई भन्थे, ‘तिमीलाई अंग्रेजी बोल्न समेत आउँदैन, तिमीलाई कसले नोकरीमा राख्छ ?’
म उनको नजरमा तल परेकी मात्र थिइँन म आफै पनि आफूलाई कमजोर महशुस गर्न लागेँ । मलाई लाग्न थाल्यो कि म उनका लागि योग्य छैन ।
म घरका सबै काम हेर्थेँ । बजारबाट समान किन्नेदेखि बीमारीको रेखदेखसम्मका सबै काम म नै गर्थेँ ।
उनले मलाई बाहिर लैजान बन्द गरे, न कुनै पार्टीमा न कुनै डिनरमा न त कुनै सामाजिक समारोहमा ।
जुन व्यक्तिलाई मैले सबैभन्दा बढी माया गरेँ, उही मलाई छाडिरहेको थियो । मबाट टाढा राखिरहेको थियो ।
विस्तारै–विस्तारै हामीबीचको प्रेम सकियो ।
मलाई यो प्रेम सकिएको महसुश भयो, मैले यसलाई फिर्ता पाउने कोशिष गरेँ । सफल हुन सकिँन । एक रात उनी घरबाट निस्के ।
सम्बन्ध बचाउनका लागि
घरबाट ँिहडेपछि उनी कुनै अर्को घरमा बस्न थाले । म आफ्नो छोरी र घरका अन्य सदस्यसँग पुरानै घरमा बस्न थालेँ ।
यस्तो होइन कि मेरो घरवाला मलाई त्यहीँ राख्न चाहन्थे । उनीहरुलाई आशा थियो कि शायद मेरो त्यहाँ बसाईले मेरो पति फर्केर आउँछन् ।
ढोकामा हरेक ‘नक’ हुँदा म दौडिएर जान्थेँ । तर, त्यहाँ कहिले कुरियलवाला वा कहिले नोकरको अनुहार देखेर निराश हुन्थेँ ।
मैले आफ्नो पुरा जिन्दगी उनको आसपास बुनेँ । मेरो उमेर उनीसँगै बितेको थियो । यो समय नयाँ शुरुवात गर्ने बेला थिएन ।
आफ्नो सम्बन्ध बचाउनका लागि मैले कैयौ पटक सोचेँ । मै आफै लडेँ । मेरो मानसिक अवस्था सम्झाउनका लागि मेरी छोरी सानी थिइन् ।
यी सबै कारणले मेरो स्वास्थ्य निकै खराव भएको थियो । म चाहन्थेँ कि उनको काँधमा टाँउको राखेर आराम गर्न सकुँ ।
मलाई उनको आवश्यकता महशुस हुन्थ्यो । म चाहन्थेँ कि उनले लगाएको घाउमा उनी नै मलम लगाउन् ।
तर, उनले कोर्टमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन गरे ।
धेरै कठिन हालतकाबीच मैले मुद्दा लडेँ । मलाई यो सम्झन तीन वर्ष लाग्यो कि जुन सम्बन्ध बचाउन मैले यति प्रयास गरेँ, जुन पहिला नै मरिसकेको थियो ।
म जो व्यक्तिका लागि यति धेरै गरिरहेकी थिएँ, जसको जिन्दगीमा मेरो केही अस्तित्व भएन । अन्तिममा म थाकेँ ।
म थाकेँ, अदालतका जाँदा जाँदा । वकिलका सवालको जवाफ दिदादिँदै । र, कानुनी खर्च जम्मा गर्दागर्दै ।
आखिरमा आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि तयार भएँ ।
मैले आफ्नो नयाँ परिचय स्वीकार गरेँ ‘सम्बन्धविच्देदवाली’ । एक यस्तो उपनाम जसलाई हाम्रो रुढीवादी समाजले इज्जतसँग हेर्दैन ।
म त्यसबेला ३९ बर्षको थिएँ । मेरो लागि सबैभन्दा पहिला चुनौति नयाँ घर खोज्ने थियो । मलाई कैयौँ प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो, जस्तै तिम्रो पति कहाँ छन् ?
उनी के काम गर्छन् ?
म यी सवालका लागि तयार थिइँन । म पुराना ती दिन सम्झिन चाहदैनथेँ । मेरो साथीले मलाई समयबाट बाहिर निकाल्ने कोशिष गरिन् ।
उनी मेरो जिन्दगीमा कुनै भगवान भनेर आइन् । उनले मलाई साहस दिइन्, ‘सिंगल मदर’ हुनका लागि तयार बनाइन् । यी सबै त्यति सजिलो थिएन ।
मेरो पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेलगत्तै ती साथीसँग विहे गरे । जब म उनीहरुलाई देख्थेँ, मेरा पुराना घाउ बल्झिन्थे ।
नयाँ याद सजाउनका लागि
त्यहीँ कठिनघडीमा मेरो बुवा–आमाको पनि निधन भयो । मेरो जिन्दगीमा मात्र दुई चिज बाँकी रहेँ, मेरो नोकरी र मेरो छोरी ।
मैले आफ्नो करियरमा ध्यान दिन लागेँ । विस्तारै–विस्तारै कर्पोरेट घरानाको सीढी चढन थालेँ ।
मैले आफ्नो मनपर्ने विषय अर्थात् ‘लेखन’ मा आफुलाई व्यस्त गरेँ । आफ्नो पतिलाई खाना बनाउनुको सट्टा मेरो साथीका लागि खाना बनाउन लागेँ ।
आफ्नो पतिको कमी पूरा गर्नका लागि मैले भर्चुअल दुनियाँ अथवा सोशल मिडियामा केही साथी बनाउन शुरु गरेँ ।
यो भर्चुअल दुनियाँले मलाई आभास गरायो कि आसपासको संसार कति ठूलो छ ।
मेरो एक्लोपन फेसबुकमा मेरो पोस्टमा आउने लाइक र कमेन्टसले टाढा बनाउन थाल्यो ।
म फेरि एक पटक आफ्नो जिन्दगीमा जिउन लागेँ । मलाई मेरो शक्तिको महसुश हुन थाल्यो । र, मैले मेरो पीएचडी पुरा गरेँ ।
जुन चिज मेरो जिन्दगीबाट खोसियो, मैले ती सबै पलहरु पाउने कोशिष गर्न थालेँ ।
लज्जा महसुस गर्नुको सट्टा, मैले मानिसँग भेट्न र विवाहका वारेमा जान्न शुरु गरेँ । यति मात्र होइन मैले सुन्दर साडी लगाउन थालेँ ।
नयाँ शहरमा नयाँ जिन्दगी
म ती मानिसहरुलाई जवाफ दिन चाहन्थे जसले सम्बन्धविच्छेद गरी एक्की महिला सधै दुखी रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।
यस्ता मानिस मलाई देखेर आफ्नो आँखा ठूला बनाउथेँ । तर, यसले मेरो आँखाको चमक झन् बढाउँथ्यो ।
मैले आफ्नो घर बनाएँ । कार्यालयको काममा केही विदेश यात्रा पनि गरेँ ।
चार वर्षपछि मलाई एक ठूलो फैसला गर्नुथियो । एक नोकरीको शिलशिलमा शहर छाडेर अर्को शहर जानु थियो । मैले नयाँ शहरमा बस्ने निर्णय लिएँ ।
मैले एक स्वतन्त्र महिलाका रुपमा दोस्रो जन्म लिएँ । आज मलाई कसैले काँधमा राख्न जरुरी छैन ।
म एक्लै हिँडन सक्छु । पुरा आत्मविश्वासका साथ चाहेँ जतिसुकै अध्यारो किन नहोस् ।
यो जीवनकथा दक्षिण भारतमा रहने एक महिलाको जिन्दगीमा आधारित छ ।
बीबीसी हिन्दीका लागि संवादादात पद्या मीनाक्षीले उनीसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । माहिलको आग्रहमा उनको परिचय गोप्य राखिएको छ ।
यो शृृंखलामा आधुनिक भारतीय महिलाको विचार र उनका अगाडिका विकल्प, उनका आकांक्षा, उनका प्राथामिकता र उनका इच्छा पेश गर्ने गरिन्छ ।
« Reply #2 on: February 04, 2018, 06:11:13 AM »
जब मलाई थाह भयो...